Imibandela - Ukulahlekelwa ngesonto zonke izikhala - 10% efika ku- £ 100 |
Imibandela – Ukulahlekelwa ngesonto zonke izikhala - 10% efika ku- £ 100
Lokhu ukukhuthazwa azobonakala phakathi nekhulu le-19 – 25th January 2017 (GMT).
GMT lilingana nokuchitha imali engu ACST -9.30hrs, LOKHU -1hr, PTZ + 8amahora.
Inzuzo kuphela Nokulahlekelwa (P&L) umsebenzi phakathi nenkathi ukukhuthazwa ngeke ayabalwa izimfanelo umonakalo emuva.
Ukulahlekelwa Emuva azonikezwa ngokusho ukulahlekelwa net (imali yangempela lapho beshonelwe umntwana) on wonke slot imidlalo.
Abadlali kufanele ngabe imali £ 10 esikhathini ukukhuthazwa ukuze qualify.In esenzakalweni inetha P&UJehova bazenzela £ 10 e beshonelwe umntwana, uzothola umfutho ebalelwa 10% ukulahlekelwa yakho kwi slot imidlalo kuze kufike of £ 100.
ukulahleka kwezinto Maximum lemali emuva £ 100 Ibhonasi izimali.
Standard izidingo ibhonasi babheja engosini ye 30x lemali ibhonasi zisebenza ngaphambi amabhonasi noma yimuphi ambikele ohambelana kungenziwa kuhoxiswe.
Bonus izimali zuza kusuka lokhu kunyuswa, ingasetshenziswa kuphela ukudlala kwi slot yethu games.Wagers on Blackjack futhi Roulette musa nomthelela ekuncishisweni of imfuneko babheja engosini ye bonus ezilinganisweni.